Miaina ny nofinofy eropeana: 5 Firenena tsy maintsy tsidihina | Save A Train
Home > Travel Islandy > Miaina ny nofinofy eropeana: 5 Firenena tsy maintsy tsidihina
ny Emma Steel
Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara, Nandeha lamasinina, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Greece, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe, Travel Islandy
(Last Nohavaozina: 15/01/2022)
I Eoropa no kaontinanta mitarika mankany amin'ny tany mandroso, onenana, ary tanàna maoderina feno fahafinaretana. Misy fahagagana maritrano marobe, tranombakoka, sy trano fisakafoanana any amin'ny firenena eropeana rehetra eritreretinao. Ny tontolon'ny fiainana amin'ny alina sy ny sakafo manerana ny kaontinanta dia tsy misy farany. Ny fiainana dia sy mahasarika voajanahary ao amin'ny kaontinanta dia sady mahavariana no mora idirana. Ary noho ny singa EU sy ny tambajotram-pifandraisana avo lenta manodidina ny kaontinanta, mora ho an'ny mpandeha an-dalambe ny mizaha ny kaontinanta iray manontolo amin'ny fandroana iray monja. Mba hiaina ny nofinofy eropeana dia afaka mampiasa fiara manofa na fitateram-bahoaka ianao.
Mila IDP ve ianao (Fahazoan-dàlana iraisam-pirenena) Handeha fiara any Eropa?
tsara, ny firenena sasany toa an'i Italia dia mitaky mpamily vahiny hanana fahazoan-dàlana mpamily iraisam-pirenena ho porofon'ny fahaizany mitondra fiara. Tsara ny mitondra ny fahazoan-dàlana na dia any amin'ny firenena izay tsy mitaky aza izany satria mety mila izany ianao handresena lahatra ireo masoivohon'ny mpampanofa fiara eo an-toerana sy ny polisy misahana ny fifamoivoizana fa mpamily mendrika ianao. koa, alohan'ny nandeha, zahao amin'ny CDC mba hahalalana fa ireo toerana itodihana resahina eto dia tsy voakasiky ny areti-mandringana. Dia ao an-tsaina, ity ny lisitry ny 5 firenena tsy maintsy tsidihina any Eropa.
1. Santorini, Gresy
Ny olona izay efa tonga tany Santorini dia mino fa ny tanàna no toerana be fitiavana indrindra eto Eropa sy eran'izao tontolo izao. Mety ho an'ny mpivady vao mitady a toeran-tantely. Mahagaga anao ny fomba fijerin'ny kaldera sy ny masoandro mody. Afaka mandeha an-tongotra ianao, mandehana fitsangantsanganana an-tsambo, na manaova tolakandro tony amin'ny torapasika volkano mainty ao an-tanàna. Raha tianao ny tavoahangy, ho tianao ny santionany divay eo an-toerana manaraka ny Mediterane. Santorini dia alka trano fonenan'ireo hotely lafo vidy indrindra any Gresy.
2. Ny zavatra niainan'ny nofy eropeana: Lake Como, Italia
Ny Lake Como dia malaza amin'ny karazana villa sy vohitra kanto tsy misy farany, sakafo matsiro (ianao ve io, Pizza italianina?), ary faritra sary mahavariana, ireo rehetra ireo dia mifandray amin'ny serivisy fitaterana isan'andro. Raha manam-potoana sy dolara fanampiny ianao, afaka manakarama sambo maotera ianao ary mitaingina ny tanàna kely any Bellagio. Amin'ny fomba hafa, mety handehandeha ihany koa ianao na mampiasa a bisikileta mandeha amin'ny entona ary mankafy ny fomba fijery tsara tarehy samirery. Mahagaga ny toetrandro eto mandritra ny taona ary noho ny kolontsaina milamina any amin'ny faritra (tsy dia betsaka ny mpizahatany), mahazo ny fotoana mety indrindra ianao hiala amin'ny fikolokoloana sy hozatry ny fiainanao mahazatra. Ny Lake Como koa dia manana vibe tantaram-pitiavana amin'ny volan-tantely.
Florence hiara-komana amin'ny lamasinina
Milan Hihomehy miaraka amin'ny lamasinina iray
Turin hiaraka amin'ny lamasinina
Genoa hiaraka amin'ny lamasinina
3. Reykjavik, Islandy
Ny renivohitr'i Reykjavik any Islandy dia iray amin'ireo tanàna eropeana tsara indrindra ho an'ny mpandeha, noho ny antony maro. Raha mahaliana anao ny tantara, ho tianao i Reykjavik noho ireo tranombakoka kanto sy manankarena eo amin'izy ireo Tranombakoka Maritime Viking, ny Einar Jonsson Museum, ary ny Museum Museum. Ny renivohitra koa dia voahodidin'ny toerana manintona mahavariana, mahatonga azy io ho seranan-tsambo fidirana tsara indrindra ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena. Hahita sy hiaina zava-mahatalanjona ara-jeôgrafika an-taonina ao anatin'izany ny isa lava, riandrano, ary ny Lagoon Manga. Vatolampy, vongan-dranomandry, morontsiraka fasika, ary ny volkano koa dia mamaritra ny manodidina an'i Reykjavik.
Ho an'ny vatosoa sakafo, ho tianao ny manandrana karazan-tsakafo Islandey nentim-paharazana amin'ny toerana toa an'i Sushi Samba sy Baejarins Beztu Pylsur. Raha tianao ny fiainana dia, afaka mandeha mijery trozona ao amin'ny seranan-tsambon'i Reykjavik taloha ianao, trano ho an'ny 20 karazana trozona samy hafa. Afaka mahita feso koa ianao, puffins, ary porpoise, ankoatra ny biby an-dranomasina hafa.
4. Miaina ny nofinofy eropeana: Prague, Repoblika Tcheky
Mpizahatany maro no tia an'i Prague amin'ny hetsika mahatalanjona, manomboka ny diabe fialan-tsasatra ka hatrany amin'ny matso isan-taona. Ny sasantsasany amin'ireo hetsika feno fahafinaretana izay tokony hataonao rehefa any Prague dia asio Bohemian Carnevale rehefa mitsidika ny tanàna ianao amin'ny volana feb., na ny Fetin'ny labiera Czech rehefa mitsidika ny volana Mey. Ny fiainana amin'ny alina eto koa dia antony lehibe fitsidihan'ny olona, miaraka amin'ny klioba Jazz sy ny hafa velona mozika manjaka eo amin'ny sehatry ny fialamboly. Ny Fetiben'ny Mozika Iraisam-pirenena Prague Spring dia isan'ireo fisongadinan'i Prague. Afaka manao fety mandritra ny alina ianao noho ny fiarovana mafy manodidina ny tanàna. Raha tianao ny kanto sy ny tantara, fitsidihana ny tranom-bakoka Manya na ny tranombakoka Kafka no hanao tetika ho anao.
Nuremberg hatrany Prague miaraka amina lamasinina
Munich mankany Prague miaraka amina lamasinina
Berlin mankany Prague miaraka amina lamasinina
Vienna mankany Prague miaraka amina lamasinina
5. Traikefa amin'ny nofy eropeana: Paris, Frantsa
Toro marobe malaza, fotoana fiantsenana tsy misy farany, sakafo matsiro maro karazana, manan-karena tantara, ary fanangonana zavakanto, as well as world-class parks and gardens make Paris stand out from the crowd. Some of the landmarks that you need to see ary koa ny zaridaina sy zaridaina manara-penitra eran-tany no mampiavaka an'i Paris amin'ny vahoaka. Ny sasany amin'ireo mari-pamantarana tokony ho hitanao anisan'izany ny Tilikambo Eiffel, Holy Basilica, Arc De Triomphe, Ny tranombakoka Louvre, ary The Palais Garnier. Raha mafana fo amin'ny fiantsenana ianao, ho tianao ny manosotra soroka amin'ireo lamaody any Paris any amin'ny Rue Du Commerce, Boulevard Saint Germain, ary haitraitra hafa tsena eny an-dalambe. Ary raha tianao ny kanto, misy karazana fanangonana zavakanto manodidina an'i Paris azo alaina ohatra, anisan'izany i Musee d'Orsay, Musee National Picasso, ary Musee du Quai Branly.
Tsy latsa-danja velively amin'ireo tanàna “lisitra siny” sy tanàna mpizahatany i Eropa. Miankina amin'ny teti-bolanao izany, fotoana, ary tanjon'ny fitsidihana. Ity lisitra ity dia hanokatra vavahady ho anao hizaha ireo toerana mahatalanjona indrindra eto amin'ny kaontinanta ihany.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy amin'ny drafitra fitsangatsanganana any amin'ny 5 Firenena manonofinofy any Eropa. Fitsangatsanganana an-dàlambe manerana an'i Eoropa dia mety ny mandeha lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “The European Dream” ve ianao?: 5 Ireo firenena tsy maintsy mitsidika any Eropa ”ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
dream dreamcometrue EuropeanDream MustVisitCountriesInEurope TravelbyCar travelbytrain TravelCzechRepublic travelfrance travelitaly
Emma dia miasa amin'ny maha-consultant miaraka amin'ny orinasa avy amin'ny firenena samihafa. Ny asany dia mitaky fitsangatsanganana matetika mba hifandraisana mivantana amin'ireo mpiara-miasa aminy, satria ny fitsangatsanganana no fialam-boly ataony dia mahatonga ny asany ho lavorary izany. Tiany koa ny manoratra indraindray na dia lahatsoratra mifandraika amin'ny dia aza, fa koa ny fahasalamana sy ny fomba fiaina. - Afaka tsindrio eto raha Mifandraisa amin'i Rebecca
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe